Kufambira Wenera kunotsemurana nekaformer student kangu – Vanoda Zvinhu
Ndakanga ndakaneta zvangu after ndabva kubasa and yet some assignments were waiting for me.nndakabva ndati regai ndimbotandara zvangu pa facebook . wanike ahhhh , paya pane list of people u may know inga zvapana getrude kasikana kemeso mashava, kamwana aka ndaiva ndambokadzidzisa kare kare kuruzevha pane imwewo secondary school pandakaitira temporary teaching, ndaikada but ndainyara plus iyo iya mitemo yekuti heee teacher heee mwana wechikoro wat wat. But now kakange kapedza chikoro. Ndakabva ndaitumira friend request hana ichirova coz mwana aiva anditora moyo uyu. Pasina nguva refu were were now friends pa facebook.
After a week or so of chating pa fb ne pa whatsapp ndakabva ndafunga kurikanda shoko re luv. Iko ka babie aka kaiva kava kushanda jozi , hanzi mu saloon wat wat , ini ndikati manje uchasvirirwa izvozvo. Ndakarikanda rerudo iro shoko, kakambo ramba ramba but pasina nguva yanga yangova sweetie , babie,. Love ye long distance inotapira vakomana , ini semunu aiva mu Bulawayo ndakakaudz akuti am coming ikoko pa monthend . kakati huya ,
Come monthend guys ndakaunganidza zvi mari ndikati nhasi ndochinosvira babie riya randaitya kuudza kare kare. Moyo wangu wakambodedera sezvo ndaiva ndisati ndambopinda mu joburg. Kakandipa zvivindi getrude , kakati kaigara nevamwe vasikana 2 mu room one , ye joni munongoizivawo. So plan was ku booker hotel , and ma hotels e joburg they are far cheaper than ekuno kwedu kwa sadza.
Ndakanotenga ticket , the following day on a Friday ndini uyo tande kunokwirirwa ma bhazi e joni. Bhazi rakasimuka kuma 3pm, and tiri munzira I was updating her kuti ndava pakati.babie rainge ratowana ka lodge kakachipa. Bus rakarova road husiku hwese , ndaisaziva kuti joburg is that far. Takasvika mu park station kuma 4 makuseni , ndokubva ndamirira kuti kuchene babie risvike . 6 ichichaya babie raiva ratouya . ko irwo runako , mwana aiva abvumiwa ne joni uyo , magaro kuita kunge hameno , smile chaiita yekuramwira Gettie . “hesi kani , Bee. Wafamba bhooo I hope, “ kakadaro kamwana kevaridzi kachinyara nyara.
Takabva tapinda mune kamwe ka lodge kari pa parkstation kanonzi parkstation inn hotel. Se gentleman wo ndakati ngatimbonotsvaka food , takananaidzana zvedu muguta re joburg, iniwo apa ndaivanza kutya kwangu coz joz inozivirwa mbavha. Takatenga food , ini ndakabuda pachena kuti ndotoda riri sadza , ka babie ndikakatengera zvakowo zvechi salad salad hanzi chiii ko hameno , moyo waiva wava pa beche .
Takadzokera mu room and I took a bath. Ndapedza kugeza ndakawana gettie katorongedza zvinhu mu room medu, ndakasvikogara pa bed , ndikati hug kumwana , takaita eye contact nemwana , kiss ndikanzi ngaaaa. Babie ndakatanga kuribata zvinyoro nyoro pamazamu aro , zamu raiva richakangomira kuti twiiii, ndikati nhasi makwikwi zvomene, achaiona luv ye mukaranga. Ndakada kumubvisa hembe , akati “ ahhh iweeee ndosvoda ini ahhh . pinda mujira uzvivhare ndibvise hembe ndega” akazosara kupedza kutaura ndatohwanda mujirakare kare. Ndakavhurwa kumeso , mwana akabatana mhani uyu, ndakatanga kumuyamwa minyatso yake , ndikanzwa shasha yava kufemera pamusoro, ndikati rumwe ruoko pazamu , muromo pane mumwe munyatso , rumwe ruoko pa mhata chaipo, mwana aiva ne beche uyu. Akazvongonyoka kunge mhakure yarohwa yapinda muchirugu chehuku, ini ndikati nhasi uchandiona. Kop waizombobvuma kuti we were once teacher and pupil here.
Ma bed aiva mu room medu they were 2 , ma bunk beds aya anoti rimwe pasi rimwe pamusoro. Saka ndakagara pa bed repasi , iye akamira akabatira rimmwe bed repamusoro akatsika pa bed randaiva ndakagara.ndakapinda pakati pemakumbo ake ndikatanga kudya beche. Ndakayamwa matinji kunge ka mhuru kari kuyamwa pana mai vako . ndakazviona kuti aiva asati ambosanganawo nezvakadai mwana uyu.
Akagomera akarereka musoro mwana wevaridzi , ndikanzwa makumbo ake ava kudedera mwana ndikati nechemumoyo hezvokooooo, nhasi unomama chete. Nenguva isipi ndakanzwa kuti yuwiiiiiii yuwiiiiiii ndiye tsaaaa tsaaa tsaaa mukanwa mangu, akaregedza bed raanga akabata aakatanga kundpuruzira musoro. Akarara pa bed pandaiva , ini ndikati bodoo zveee not now , ndakayamwa nzeve dzake , zvakamukurira mwana wevaridzi akati mhere kwetsu, ndakambomira ndichiti zvimwe kurwadziwa , ndikanzwa don’t stop kani Bee, usarega kaniiii ndatiii yuwiii ,ndakaita zvandaiva ndanzi ndiite, ndakaona shasha yonanavira kumboro yangu , ikatnga kuibata . neniwo zvaiva zvava kukunda, ndakaipfekedza condom , iyo mboro.
Ndikabva ndatanga kurova rova muromo we beche naiyo iyo chebaro, ndikati zvishoma nezvishoma nyaaa , ndiye nyaaaaa , akangoshama muromo chete mwana wevaridzi , no sound , ndiye nya nya nya nya nyanya . ndakambundikirwa kaniiiii , ndikanzwa shasha yava kukoirawo , mwana anogona chikapa iyeye , iniwo ndikati kwetezveee ndodzorerawo ini , ndingangokoirwa ndakamira , dzorere dzorere dzorere, takaramba tichidaro , ini pamusoro shasha iri pazasi.
Takachinja stayira ndikamufongoresa, ndikati isai chiuno chenyu kumabva zuva madzimai , ndiko kunobva nengoni, mwana akachukucha chiuno , ichongova hmmmmmm aisssssshhhhhh yuuuuuuu babie kaniiiiii babie kaniiiiiii babiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ndiye ziiiiii akawonyera pillow, ndiye ziiiiiiii, iniwo ndakabva ndati chirega ndichitundaaaa , babie ndakarirarisa ne side , ndikatanga kuchikoira manje, ndakanzwa hwava kuuya huturu nndiye waaaa waaaaa waaaa waaaaaaaa gaaaaaa .takabva tarara takadaro. Hope dzikabatira ipapo , takazomuka kuma 2 . ‘” nhy Bee ko wakaitwa rinhi zvaunazvo “ ndikati zvipi , kukanzi “ your penis is circumcised dear , and I enjoyed ‘” .
Ndipo pakatangira luv yangu naye mwana uyu , na nhasi haade neni mwana uyu ,
Short sviro story: Nyoro kuFiyo!
Next story Ndakazomukwira asingafungire Netsai
Previous story Ndakazoiwana Pain Killer yakandipedza nyota: A Lady’s version